अर्थतन्त्र Archives - ramechhapkhabar.com
भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलको भाउ, फेरि मूल्य बढ्ने संकेत
२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरि बढेर आएको छ । यससँगै निगमले भारतीय निगमसँग किन्ने पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १९२.९४ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर १८४.३६ रुपैयाँमा थियो ।...
३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । आज रातिबाट लागू हुनेगरि बढाइएको भाउअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि उक्त मूल्य प्रतिलिटिर १ सय ६० रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी डिजेलको भाउ पनि...
२९ वैशाख, काठमाडौं । आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२३.८९ रुपैयाँ र खरिद दर १२३.२९ रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोक्दै डलरको खरिदबिक्री दर तोकेको हो । यसैगरी, एक यूरोको बिक्री दर १३०.८० रुपैयाँ र बिक्री दर १३०.१७...
२९ वैशाख, काठमाडौं । बिहीबार सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाउ ८०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९७ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९७ हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।...
२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार बैशाख २८ गतेका लागि विभिन्न मुलुकहरुको मुद्रा बिनिमयदर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १२३.४४ पैसा र विक्रीदर १२४.०४ पैसा रहेको छ । विवरण अनुसार अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर...
बढ्यो डलरको मूल्य, अन्य मुलुकको मुद्राको दर कति छ ?
२६ वैशाख, काठमाडौं । आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२३.३७ रुपैयाँ र खरिद दर १२२.७७ रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्दै डलरको खरिद/बिक्री दर तोकेको हो । यस्तै, एक युरोको बिक्री मूल्य १३०.१९ रुपैयाँ र खरिद मूल्य...
आज कतिमा हुदैछ सुनचाँदीको कारोवार ?
२६ वैशाख, काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ९८ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार तोलाको ९८ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य...
आजदेखि ९ करोडको आईपीओ बिक्री खुला, क-कस्ले दिन पाउँछन् ?
२५ वैशाख, काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले विद्यमान जारी पूँजी १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँको ८.२२ प्रतिशत शेयर निष्काशन...
अब हवाई यात्रुले भाडादरमा नै विमानस्थल सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने, कति तिर्नु पर्छ ?
२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वृद्धि गरेको हवाई यात्रा सेवा शुल्क जेठ दोस्रो साताबाट लागू हुने भएको छ । गएको चैत मसान्तमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नयाँ शुल्क १४ जेठबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै वृद्धि भएको विमानस्थल...
एकै दिन यति धेरैले बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
२२ वैशाख, काठमाडौं । बिहीबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिनसम्म केही घटेको सुन बिहीबार फेरि बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ...